uhteik: ဧရိပ်မွန် အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း သမိုင်း
ဧရိပ်မွန် အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း သမိုင်း
၁၉၅၈ခုနှစ်တွင် သီလရှင်ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမာ နန္ဒီနှင့် ညီမ ဒေါ်နန္ဒထေရီတို့သည်
တောင်ငူမြို့ ဇေယျာ သီရိသီလရှင်စာသင်တိုက်နှင့်မိဘမဲ့အမျိုးသမီးကလေးများကျောင်းကို
စတင်တည်ထောင်ပြီး လေးနှစ်ကြာသော် ဒေါ်နန္ဒထေရီသည် မန္တလေးမြို့တွင်လည်း အလားတူ ဆင့်ပွားကျောင်းတစ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို တည် ထောင်ရန် ရွှေလက်ဝါးအမေထား၊ ကျောင်းဆရာကြီး ဦးဘသိုက်၊ ၀ါးတန်းဦးဘသန်းတို့နှင့်အတူ မန္တလေးမြို့ ၌ မြို့မိမြို့ဖများကို စည်းရုံး၍ ၁၉၆၃ခုနှစ် မေလတွင် မိဘမဲ့အမျိုးသမီးကလေးများကျောင်း စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပါသည်။
ယခုလက်ရှိ မြေ ၃.၈၂ဧကကို အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ဧမေ(မန္တလေးတိုင်း ရဲမင်းကြီးဦးဘတူ၏ဇနီး)က
မြေပိုင်ရှင် ဦးမောင်ကိုထံမှ မြေအချို့ကို မိဘမဲ့အမျိုး သမီးကလေးများကျောင်းတည်ထောင်ရန် အလှူခံ၍ တစ်မျိုး၊ မြေအချို့အား အဖိုးအခပေး၍ ၀ယ်ယူ၍ တနည်း ၁၉၆၃ခုနှစ် မေလ ၂၇ရက်တွင် စာချုပ် ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့ပါသည်။
မြေရရှိပြီးသော် အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ရွှေမြင်းဦးထွန်းလှိုင်+ဒေါ်ဒေါ်သိန်းတို့မှ ၁၉၆၄ခုနှစ်တွင် အဆောက်အအုံတစ်ခု ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
အဆောက်အအုံပြီးသောအခါ ဒေါ်နန္ဒထေရီ သည် တောင်ငူကျောင်းမှ သီလရှင် ၁၂ပါးနှင့်ကလေး ၁၅ယောက်ကို ခွဲဝေခေါ်ဆောင်ကာ သီလရှင်တစ်ပါး လျှင် ကလေးတစ်ဦးကျ အလှူခံ၍ ကျွေးမွေးကာ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် မိဘမဲ့ကလေးများကျောင်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၅ခုနှစ်တွင် တောင်ငူကျောင်း၏ကျောင်းခွဲ အဖြစ် တောင်ငူကျောင်းမှတစ်ဆင့် လူမှုဝန်ထမ်းဌာနမှ ကလေး၁၅ဦးအတွက် ဆန်နှင့်စားစရိတ်၁၃၅၀ကျပ်၊ ၀တ်စရိတ် ၁၈၅ကျပ်၅၀ပြားကို စတင်ထောက်ပံ့ခဲ့ပါ သည်။ အသင်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာ ၁၉၇၂ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ရက်တွင် အသင်းမှတ်ပုံတင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် ဆရာကြီးဒေါ်ခေမာနန္ဒီသည် တောင်ငူကျောင်းမှ မန္တလေးကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ ဧရိပ်မွန်အမည်ဖြင့် ကျောင်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ကျောင်းသူ ၁၂၀ကျော်အထိ လက်ခံပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
၂၀၀၇ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၆ရက်တွင် ဒေါ်ခေမာ နန္ဒီ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဒေါ်နန္ဒထေရီ၊ ဒေါ်ဓမ္မေသီ၊ ဒေါ်ဟေမာထေရီတို့နှင့်အတူ ကျောင်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းကာ ဧရိပ်မွန်အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စည်ပင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
စေတနာရှင်များသို့ . . .
ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ အလှူရှင်များမှ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး လှူဒါန်းမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အမျိုးသမီးငယ်များအား
ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ နေထိုင်ရေး၊ စားသောက်မှု၊ ၀တ်ဆင်မှုမှအစ အစစ အရာရာ စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုး ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် စေတနာရှင်များအနေဖြင့် ဧရိပ်မွန် အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း ဆက်လက်ဖွံ့ဉဖိး တိုးတက်စည်ပင်ရေးအတွက် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော် အပ်ပါသည်။
Posted by U Hteik အချိန် 7:33 PM
Blog Day 2008 ဒုတိယအကြိမ် ကျင်းပ နိုင်သည့်အတွက် ကေ...
Blog Day 2008 အထိမ်းအမှတ် ဒါနပြုပွဲ အောင်မြင်စွာ က...
ပြင်ဦးလွင်-မန္တလေး လိုင်းကား မှောက်၊ သုံးဦးသေဆုံး...
ဧရိပ်မွန် အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း သမိုင်း...
Blog Day 2008 အထိမ်းအမှတ် ဒါနပြုပွဲ
ဘလော့ရေးရတာ အဆင်မပြေဘူးဗျာ အီးမေးလ်ကနေ ပို့စ်တင်တ...
ဘလော့ကာတို့ရဲ့ ဒါနပွဲ မန္တလေးမှာ ဆင်နွဲမည်
ဘလော့ဒေး အထိမ်းအမှတ် ဒါနပြုပွဲ နေရာရွေးချယ်ပြီ
မန္တလေးမှာ ညနေ ၇နာရီခန့်က ငလျင်လှုပ်
မီးဘေးသင့်ခဲ့သော ရတနာပုံဈေး စတင်တည်ဆောက်ပြီ
Blog Day အထိမ်းအမှတ်ဆောင်းပါး ပါမသွားလို့ . . .
မနှစ် ဘလော့ဒေးမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး
ဘလော့ဒေးအထိမ်းအမှတ် မိတ်ဆုံစားပွဲ ကျင်းပရန် စီစဉ်
2008 World Photography Day & 2008 Blog Day
၂၀၀၈ ဘလော့ဒေး website
မောင်းထောင်ရွာကို တစ်ခေါက် ရောက်ခဲ့တယ်
စာရေးဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ကွယ်လွန်